Archive du 20190713
Maherifon’ny Firenena Makotrokotroka ny fitsenana ny Barea anio
Higadona anio amin’ny 3ora tolakandro eny amin’ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Ivato ny Barean’i Madagasikara.
Kaominina eto Madagasikara Hotantanana PDS avokoa ?
Hatramin’izao dia tsy nivoaka ny didim-panjakana hiantsoan`ny governemanta ireo mpifidy handatsa-bato, izay araka ny lalàna 90 andro mialoha ny andro fandatsaham-bato.
Ben’ny tanàna Ireo toetra takiana aminy
Amin’ny volana oktobra ho avy izao dia hiroso amin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna isika eto Madagasikara. Inona no tokoa marina no asan’izany mpitantana ny tanàna izany ?
Imbiki Herikaza « Mila fifohazan-tsaina faobe isika… »
Efa hiditra ao anatin’ny fahenim-bolana nitondrany ny Filoham-mirenena amin’izao fotoana izao.
Filohan’ny Antenimieram-pirenena Mila fahaiza-manao sy traikefa maro lafy
Misy anarana maromaro voatonona hiandraikitra ny toeran’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena izay hivory ny talata ho avy izao hifidy indrindra io filoha io sy hametraka ny vaomieran’asa.
Fitsinjaram-pahefana tena izy Zava-dehibe ny fampitana fahaiza-manao
Ny vondrona itsinjaram-pahefana dia mbola ambetin-dresaka eo anivon’ ny mpanara-baovao.
Depiote Andriambelosoa Heriniaina “Tsy ho mpanangan-tanana fotsiny aho…”
Dimy taona ihany no fe-potoana omen’Andriambelosoa Heriniaina, solombavambahoaka voafidy tao anatin’ny distrikan’Avaradrano ny rehetra dia ho afa-po amin’ny asa vitany ireo vahoaka nifidy azy.
Fahitalavitra Africanews Novidian’i Ylias Akbaraly 20 tapitrisa dolara
Novidian’ilay mpandraharaha karana mizaka zom-pirenena Malagasy Ylias Akbaraly tompon’ny vondron’orinasa matanjaka indrindra eto Madagasikara dia ny Sipromad ny orinasan-tseraresera dia ny Televevizonina panafrikanina Africanews, izay an’ny Euronews NBC.
Famoahana zandary tany Moramanga Nanao antso avo ho an’ny fahamarinana ny praiminisitra
Tontosa omaly maraina ny lanonana famoahana ofisialy ny andiany miisa telo avy ao amin’ny Sekoly ambonin’ny Zandarimariam-pirenena (ESGN) tany Moramanga, Faritra Alaotra Mangoro.
Fanorenana tsy ara-dalàna eny Ivandry Ahiana hivadika ho olana ara-diplaomatika
Misy trano iray aorina manakaiky ny tranon’ny masoivoho frantsay eny Ivandry, lasa mifampikasoka amin’ny faritra misy ny masoivoho ny rindrin’io trano io.
Fitsenana ny Barea Handrindra ny fifamoivoizana ny polisim-pirenena
Handray anjara mavitrika amin’ny fandrindrana ny fifamoivoizana mandritra ny fitsenana ny ekipam-pirenena BAREA hotontosaina anio folakandro eny Ivato ny polisim-pirenena.
Atleta mipetraka etsy Ampefiloha Midongy tsy mety mandray ilay solon-tsakafo 2.500 Ar isan’andro
Mitaraina ho tsy ampy sakafo ireo atleta mipetraka etsy Ampefiloha, ampitan’ny sekoly ambony ENS handeha hiatrika ny lalaon’ny Nosy
Fifidianana mpitantana FMF 5 ireo kandida ho filoha ary 37 ireo kandida ho Komity Mpitantana
Nifarana omaly zoma 12 jolay 2019 tamin’ny 5 ora hariva ny fandraisan’ny Comité de Normalisation “CN” teny Isoraka ny
Anicet sy Metanire Tsy afaka nihazo an’i Madagasikara
Amin’ny fo feno alahelo no ilazako anareo fa tsy afaka higadona an-tanindrazana rahampitso ny tenako.
Melvin Adrien Mpiandry harato ankafizin’ny Malagasy
Mpiandry harato tompon-toerana tamin’ny fandraisana anjara voalohan’ny Barean’i Madagasikara tamin’ny fifaninanana CAN i Melvin Adrien izay tena nankafizin’ny Malagasy tokoa tamin’ny zava-bitany tany Egypte,
Fiadiana ny tapakilan’ny “Mondial 2022” Miandry ny fifanintsanana isam-bondrona ny Barea…
Ny CAN no tapitra hatreo ho an’ny Barean’i Madagasikara sy ny Malagasy fa efa manangasanga sahady kosa ny ady manaraka hiadiana ny tapakila hiakarana amin’ny fiadiana izay ho tompondaka eran-tany na ny “Mondial 2022” hatao any Qatar (21 novambra - 18 desambra).
Barea any Egypte Mitantara ny zava-nisy natrehany ny mpanao gazety Malagasy
Maromaro ihany ny zava-nisy natrehan’ireo nanatri-maso ny fandraisan’anjara voalohany nataon’ny Barean’i Madagasikara amin’ny lalao CAN “Coupe d’Afrique des Nation” any Egypte
Mila madio fo amin’izay !
Hakotroka ny fitsenana ny Barean’i Madagasikara anio, ka haseho sy hamafisina ho hitan’izao tontolo izao fa tsy manam-paharoa sy mendrika ny mpilalaontsika sy ny firenentsika manontolo.
Fiarabe nivarina tanaty hantsana Olona 4 namoy ny ainy
Nandriaka ny ra tany amin’ny lalam-pirenena faha-42 noho ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina.
ANOSIBE Zazalahy kely niampita arabe maty voadonan’ny fiara 4x4
Zazalahy kely iray manodidina ny 12 taona no maty omaly atoandro tokony ho tamin’ny 1 ora teny Anosibe, Boriborintany fahefatra rehefa niampita arabe.
ALASORA Nahazo kaomisarian’ny polisy vaovao
Voavaha amin’ny ampahany ny tsy fandriampahalemana mampitaraina ireo mponina ao anatin’ny distrikan’Antananarivo Avaradrano .
Firenena arabo sy Sina Manana ambim-bava hatrany
Na manao fandraharahana be aza amin’izao fotoana izao ny firenena matanjaka sasany dia saika miditra amin’ny trosa avokoa.
Fanampiana zaza marary Nanavao ny fiaraha-miasany ny Star sy ny Compassion Madagascar
Betsaka ireo olona tsy manana fahafahana hitsaboana tena intsony ankehitriny noho ny hasarotan’ny fiainana, voakasik’izany ny ankizy madinika.
Tsy fahamarinan-toeran’ny vola Misakana ny fandraharahana
Anisan’ny tanjon’ny politika ara-bola ataon’ny governemanta amin’ny firenena rehetra ny fampiakarana ny harinkarena faobe.
Hasarotam-piaro Ramatoa namono tena nisotro “nuvan”
Hasarotam-piaro ! Olana teo amin’izy mivady no nahatonga an’ity renim-pianakaviana iray nisafidy ny hamono tena, tamin’ny fisotroana “nuvan”.
Halatra omby faritra avaratry ny renivohitra Anisan’ireo dahalo raindahiny koa ny tompon’omby
Ny mpamoaka any am-bala, ny mpiompy omby halatra izay notafihin’ireo namany ihany ary ny mpivarokena no miara-mitsikombakomba amin’ny fandrobana ny biby fiompin’Avarabohitra iray manontolo.
Fanararaotana ny ampahefa-dalan’ny CAN Nisy mpitoraka fiara sy mpanao halabotry tra-tehaky ny polisy
Araka ny tatitry ny polisim-pirenena mikasika ny filaminana ny alakamisy 11 jolay teo, taorian’ny lalaon’ny Barea, tany amin’ny faritra Atsimondrano, olona efatra no voasambotra raha nikasa hitoraka fiara mandalo.
Fifandonana fiara mpitatitr’olona sy omby Olona roa naratra mafy, maty ny mpamily…
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nandratrana sy nahafatesana olona ny lalam-pirenena voalohany, teo Ambatomitsangana, tamin’ny PK 52 sy 800m, ao amin’ny fokontany Antanetikely, kaominina sy distrika Arivonimamo.